Burma Strange News (Burmese Version): သူများနှာခေါင်း အငှားတောင်း MAI လေကြောင်း
အင်းးးးးးးးးး ဘယ်ကရတဲ့ သတင်းမှန်‌တွေလဲကွဲ့ ။‌လေဆိပ် က ပြဲဖစ်ရမယ်။
scary? hmm I am going back home in april. hope nothing happens.
မြန်မာပိုင်လေကြောင်းရှိတာက မရှိတာထက်စာရင် ကောင်းတာပေါ့ ..... ကိုယ့်မှာမှ " ၀ "မရှိပဲလေ ....
တခြားလေကြောင်းရဲ့အမှတ်တံဆိပ်သုံးခြင်း မသုံခြင်းထက် ဘေးကင်းဖို့ပဲလိုပါတယ် ....
မြန်မာပိုင်လေကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက် ... ကိုယ့်နိုင်ငံက အနည်းနဲ့ အများတော့ အကျိူးခံစားရမှာပဲလေ .... မြန်မာဆို ရင် အထင်သေးတာ ဒီလို media တွေကြောင့်လဲပါမယ် တူပါတယ်....
လွပ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးကြည့် တာပါ။
Anonymous February 16, 2011 at 11:58 PM
မြန်မာပိုင် လေကြောင်း ရှိတာကောင်းသထက်ကောင်းပေ့ါဗျာ... အရှေ့တောင်အာရှလေကြောင်းတွေထဲက ပထမဆုံးလေကြောင်းတခုဖြစ်တဲ့ မြန်မာလေကြောင်းလိုင်း၇ဲ့ လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အနေအထားကို အကောင်းမြင်ပီး သာဓု ခေါ်လိုပါက လွတ်လပ်စွာ သာဓုခေါ်ပါလေ.....
ဒါပေမဲ့ အိမ်နီးချင်းလေကြောင်းတွေနဲ့တော့ နှိုင်းယှဉ်သင့်ပါတယ်။ စင်ကာပူလေကြောင်း (လေယာဉ် ၁၁၀ စီး)၊ ထိုင်းလေကြောင်း (လေယာဉ် အစီး ၉၀)ကို ထားလိုက်ပါတော့၊ မြန်မာထက်နောက်ကျမှ စီးပွားေ၇းပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့ ဗီယက်နမ် လေကြောင်းမှာတောင် လေယာဉ် ၆၆ စီး ရှိနေပါပြီ။ စုတ်ပြတ်တဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှလေကြောင်းမှာတောင် လေယာဉ် ၉ စီး ရှိသဗျ.... ဒီတော့ MAI ၇ဲ့ မကြာသေးမီကာလများက လေယာဉ် တစီးမှ ကိုယ်ပိုင်မရှိ၊ လေယာဉ်ကို ဆေးတောင် ကောင်းကောင်း မသုတ်နိုင်တဲ့ဘ၀ကို သာဓုခေါ်လိုက ခေါ်ပါလေ.....ဂုဏ်ယူလိုက ဂုဏ်ယူပါလေ....
တကယ်ဖြစ်သင့်တာက..မကြာသေးမီက. MIG29 လေယာဉ်အစီး ၂၀ ထပ်ဝယ်တာ...တရုတ်တိုက်လေယာဉ် အစီး ၅၀ ထပ်ဝယ်တာတွေ လုပ်မဲ့အစား.. http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=18726 ခရီးသည်တင်လေယာဉ်တွေဝယ်ယူ၇င်တိုင်းပြည်အတွက် ၀မ်းသာစရာပေါ့ဗျာ...
အခုတော့ တိုက်လေယာဉ်တွေပဲဝယ်ယူပြီး ခရီးသည်တင်လေယာဉ်တွေကိုတော့ အသစ်ဝယ်ဖို့ဝေးစွ ဆေးကောင်းကောင်း မသုတ်ဘဲ ပြေးဆွဲတာတွေက (ဂုဏ်ယူတတ်၇င် ဂုဏ်ယူစရာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်)
ဘေးကင်းမကင်းဆိုတာက.. ဆေးေ၇ာင်ကျွတ်လေယာဉ်နဲ့ပျံတုန်းက ဘေးကင်းကြောင်း ဘယ်အာမခံ ကုမ္ပဏီကမှ အာမ-မခံဘူးဆိုပြီးတော့ စင်ကာပူလေဆိပ်က လေယာဉ်ဆင်းသက်ခွင့်မပြုခဲ့ကြောင်းပါခင်ဗျား
Anonymous February 17, 2011 at 1:28 AM
ကမ္ဘာ မီးလောင် သားတောင်ချနင်းတဲ့.. သင်ကိုယ်တိုင်ကော လာဘ် မပေး မယူ နေဘူးလား...ဒါကိုပဲ အရင်ပြင်ကြည့်ပါဦး..တစ်ယောက် တစ်ပေါက်နဲ့ ဒီလိုပြောနေကြတာ.. ကိုယ်ကိုတိုင်ကရော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အတွက် ဘာလုပ်ပေးဘူးလဲ.. ဘာလုပ်နေလဲ.. ဘာလုပ်မှာလဲ.. ထောက်ပြတာ ကောင်းပါတယ်.. ရှေ့တင် ဒဲ့ပြောရဲသလား...
မီဒီယာတွေ သတင်းအချက်အလက် ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တင်ဆက်ပုံ လိမ္မာပါးနပ်ဖို့တော့ လိုမယ်။ အပြင်ထွက်လိုက်ရင် သိသာတယ်။ "ဗမာလား။ သိတယ်လေ။" သူတို့သိတယ်ဆိုတာ အဆိုးတွေချည်းပဲ။ နှာခေါင်းရှုံ မျက်နှာ လွှဲပြီးသား။
ထိုင်းနိုင်ငံအကြောင်း ပြောနေတာ... သင်ကိုယ်တိုင်ရော သူတို့လို တိုင်းပြည်အတွက် အနစ်နာခံနိုင်လို့လား...
လူတိုင်း ကိုယ့်ဘဝရဲ့ တစ်စိတ် တစ်ဒေသကို ကိုယ့်လူမျိုးအတွက် နှစ်မြှုပ် နိုင်ခဲ့ရင်ပေါ့...တစ်နေ့ ကျရင်...........
@February 16, 2011 8:15 PM
မြန်မာဆို၇င် အထင်သေးခံ၇တာ ဘာကြောင့်မှန်းခုထိ မသိသေးတဲ့အူကြောင်ကြောင်ငနဲကိုး။ သနားစ၇ာ...
တိုင်းပြည်ကိုစုတ်ပြတ်သတ်အောင်ဘယ်သူတွေလုပ်သွားသလဲ...တိုင်းပြည် GDP per capita က စောက်သုံးမကျတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှထက် နိမ့်အောင် လုပ်လိုက်တာဘယ်သူတွေလဲ.... ဒီတော့ အထင်သေးခံ၇တော့မပေါ့....ဒါတောင် မစဉ်းစားတတ်လဲ မတတ်နိုင်....
@February 17, 2011 1:28 AM လေယာဉ်အကြောင်းပြောယင်းစိတ်ဖောက်သွားတယ်နဲ့တူတယ်..အကြောင်းအ၇ာကသိပ်မဆိုင်တော့သလိုပဲ။ဗမာအကြောင်းဘာကြောင့်အဆိုးတွေချည်းပဲ သူတို့သိသလဲဆိုတော့ အဆိုးအသွမ်းတွေအုပ်ချုပ်နေလို့ပဲဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်။ အကောင်းတွေအုပ်ချုပ်၇င်တိုင်းပြည်ကောင်းမယ်။တိုင်းပြည်ကောင်း၇င်ဘယ်သူမှနှားခေါင်းရှုံ့မှာမဟုတ်။ရှေ့တင် ဒဲ့ဖား၇ဲသလား... ဒီမှာလာမန့်လို့ ထူးမှာမဟုတ်ဘူး.. ရှေ့တင်ဒဲ့သွားဖား၇င် ဆု၇နိုင်တယ်.....
Anonymous February 17, 2011 at 2:29 AM
ကူးသွားပါတယ် ကော်မန့် တွေရော ဗဟုသုတရပါတယ် ခင်ညာ
ဖွံြ့ဖိုးတိုးတက်ဖို့ ဆိုရင် အဖက်ဖက်က ၀ိုင်းဝန်းကူညီမှ ရပါလိမ့်မယ်။အစိုးရ ရဲ့ အကူအညီလဲလိုအပ်ပါတယ်။National Flag Carrier အ‌နေနဲ့ အစိုးရက ဘာမှကူညီ‌ထောက်ပြံ့ခင်းမရှိထားပါဘူး။သူတို့ နိုင်ငြံခားခရီးစဉ် ရှိရင် အလကား ကတ်တီးမူးလဲ အနိုင်ကျင့်ယူသွားတာ‌လောက်ပဲ သူတို့ လုပ်တတ်ပါတယ်။အပြုသ‌ဘော‌ဆောင်တဲ့အမြင်နဲ့ ‌ပြောချင်ပါတယ်။ခရီးသည်များအ‌နေဖြင့်လဲ မြန်မာပိုင် ဆိုတာနဲ့ မ‌ကောင်းမြင်တဲ့ အခံစိတ်ရှိ‌နေတတ်ပါတယ်။စင်ကာပူပိုင် ပိုးသား‌လေ‌ကြောင်းမှာ အိတ်‌ပျောက်ရင် ဘာသံမှမထွက်‌ပဲခံ‌နေ‌ပေမဲ့ အမ်‌အေအိုင်မှာ အိတ် ကျန်ခဲ့တာ ဆိုရင်‌တော့ ဆဲသံဆိုသံ မိုးသို့ ညံ ပါပဲ။အားလုံး လိုအပ်တာချည်းပါပဲ။သူ့ ဘက် ကိုယ့်ဘက်မျှ ကြည့်တတ်ပါ‌စေ။တို့ တမျိုးသားလုံးတိုးတက်ဖို့ ဆိုတာ ‌နောက်ခံ‌ကောင်းလို ပါတယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကုန်တိုးတက်ဖို့ လိုပါတယ်။
I sort of don't understand my fellow burmese ppl. We think Politics and nationalism is something we have to devote apart from our daily life. But I don't think we necessarily have to spareapart of our life for our nation sake. I grown up with parents who refused to work as government officials, who refused to do business with military personnels or take any privileges / permit given. In our everyday lives, we can fight for truth, we can choose not to be bent towards the evil. In my personal views, these small actions will drive us nearer to the goal. It is notasmall group of ppl protesting on the streets that will claim our rights, but our rights can be in our hands.